B2 स्वयम् सूचना शैली
1. B2 स्वयम् सूचना शैलीको परिचय
2. B2 स्वयम् सूचना शैलीको परिभाषा
2.1 B2 स्वयम् सूचना शैली बनाउने ढाँचा
3. B2 स्वयम् सूचना शैली प्रयोग गर्नको लागि कसरी छनौट र विश्लेषण गर्ने
4. B2 स्वयम् सूचनाले मनलाई शान्त बानाउँछ
5. B2 स्वयम् सूचनाको उदहारणहरु
के तपाईले कुनै प्रियजन गुमाएर असहनीय शोक लामो अवधिको लागि अनुभव गर्नु भएको छ ? के तपाईको मूल बस्थानमा अकस्मात बाढी आएर तपाईले सम्पत्ती गुमाउनु भयो जसले गर्दा एकै क्षणमा तपाईको जीवन सदाको लागि परिवर्तन भयो ? हुनसक्छ तपाई कठिन प्रबन्धकसँग व्यवहार गरिरहनु परेको छ जो अविवेकी हुनुहुन्छ र यो समयमा तपाईसँग काम परिवर्तन गर्ने कुनै विकल्प पनि छैन । जीवनमा यस्तो धेरै परिस्थितिहरू छन्, जुन हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । व्यक्तिहरु अप्रत्याशित तरिकामा कार्य गर्दछन् र ती हाम्रो जीवनलाई प्रायः हाम्रो सहमति वा अनुमोदन बिना प्रभाव गर्दछन् । तनावपूर्ण परिस्थितिहरूको सामना गर्दा हामी आफुलाई परिवर्तन गर्न असमर्थ हुन्छौं र हाम्रो धेरै ऊर्जा खर्च हुन सक्छ र हामी थकित र अलमल्ल पर्न सक्छौं । यदि यसलाई सम्बोधन गरिएन भने, भइरहेको तनावले डिप्रेसन, चिन्ता र अन्य मानसिक विकारहरु निम्त्याउन सक्छ । सबैले परिस्थितिको सामना गर्न आफ्नै व्यक्तिगत तरिकाहरू प्रयोग गर्दछन्, जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं ।
हामीमा प्राय “म किन?” (“Why me”) सिन्ड्रोम हुन्छ र हामी सोच्न थाल्छौं कि के यी नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू रोक्नको लागि कुनै प्रभावकारी तरीका छ । कसरी हामी अनियन्त्रित परिस्थितिहरुको तनावबाट जोगिन सक्छौं ? जीवनमा चुनौती र कठिनाइहरूको सामना गर्दा हामी कसरी शान्त रहन सक्छौं ?
हामीले आफ्नै तरीकाले परिस्थितिहरुलाई स्वीकार्ने कोसिस गर्छौं । यद्यपि, अवचेतन मनमा भएको संस्कारहरुको (स्वाभाव दोषहरूको) कारण, हामी यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न संघर्ष गर्छौं र यसलाई बिर्सन पनि सक्दैनौं । धेरैजसो नकारात्मक विचारहरूले हाम्रो मनमा खेली रहन्छन् र हामीलाई फेरि त्यही स्थितिमा पुर्याउँन सक्छ । यसले सधैं असहाय र निराशाको भावना भई रहन्छ । त्यसैले के यस्तो परिस्थितिहरूको सामना गर्न कुनै समाधान छ जसलाई हामी परिवर्तन गर्न असक्षम छौं ? B2 स्वयम् सूचना एउटा शैली हो जुन PDR (स्वाभाव दोष निर्मूलन) भित्रको एउटा प्रक्रिया हो जुन विशेष रूपमा प्रतिक्रिया या नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूलाई पार गर्नको लागि हुन्छ ।
B2 स्वयम् सूचना शैलीको प्रयोग तब गरिन्छ जब हामी अरूले गरेको गल्तीले गर्दा तनाव या दु:ख अनुभव गर्छौं र उनीहरूमा भएको स्वाभाव दोषहरु हटाउन या प्रतिकूल परिस्थिति परिवर्तन गर्न केही पनि गर्न सकिदैन ।
B2 स्वयम् सूचना शैलीको प्रयोग तब गरिन्छ जब हामी तनाव या दुखको अनुभव गर्छौं र यी मध्य एक
अरूको स्वाभाव दोष सुधार गर्न सम्भव छैन जुन तनावको कारण हो या
प्रतिकूल परिस्थिति परिवर्तन गर्न सम्भव छैन ।
हामी भन्दा जेठो व्यक्तिहरुले गरेका गल्तीहरू जो कुनै सुधार गर्न ग्रहणयोग्य हुँदैनन् या केही अपरिहार्य दुखद परिस्थिति जस्तै घनिष्ठ परिवारको सदस्यलाई घातक बिरामी लागेको पुष्टि, प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने आदि । यस्तो परिस्थितिमा मनलाई दार्शनिक तर्क दिईन्छ, जसले हामीलाई शान्त रहन र परिस्थिति जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न मद्दत गर्दछ । यहाँ ध्यान दिने एउटा कुरा के हो भने गल्ती या परिस्थिति अरुको स्वाभाव दोषको कारण भए पनि, B2 स्वयम् सूचनाले गल्ती / परिस्थितिको लागि हाम्रो आफ्नै प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्छ । त्यस कारण, स्वाभाव दोष हटाउने (PDR) प्रक्रियामा, ध्यान सँधै आफूलाई परिवर्तन गर्नमा रहन्छ । यो प्रक्रियाको माध्यमबाट हामी आफ्नै सोच र प्रतिक्रियाहरूलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्छौं, जबकि अन्य व्यक्ति या परिस्थितिले नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पेरित गर्न सक्छ ।
यसको ढाँचा हो:
प्रतिक्रियालाई उत्तेजित गर्ने घटना + परिस्थिति जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नको लागि तर्कहरु
त्यसकारण, हामी एउटा परिस्थितिको उदाहरण हेरौं कसरी B2 स्वयम् सूचना शैली बनाउन सकिन्छ ।
स्वयम् सूचना “जब” बाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि गल्तीको त्यो अंश आउँछ जुन वास्तविक उत्तेजक हो (यहाँ आफ्नो बहुमूल्य समानहरू लुटेको छ) । त्यसपछि दार्शनिक तर्क दिन्छ सबै कुराको बाबजुद पनि, हाम्रो परिवार सुरक्षित छ र यो वास्तवमा एउटा आशिर्वाद हो ।
यहाँ, परिवार सुरक्षित छ भन्ने अनुभूतिले सबै हराएको छैन, पुननिर्माण गर्न सक्छौं किन कि सबै परिवार सुरक्षित छ, भन्नाले मनलाई राहत मिल्न मद्दत गर्दछ । B2 स्वयम् सूचनाको माध्यमले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नको लागी ताकत मिल्छ र हामी स्थिर रहन्छौं ।
निम्न फ्लोचार्टले हामीलाई दृश्यात्मक रूपमा देखाउँदछ कि हामी कसरी थाहा पाउने कहिले B2 स्वयम् सूचना शैली छनौट गर्ने ।
हामी परिस्थितिको व्यावहारिक उदाहरण हेर्आैं जसले B2 स्वयम् सूचना शैलीको छनौट कहिले गर्ने भनेर बुझ्न सक्छौं ।
गल्ती/कमि: ‘डाक्टरले काकी एलिसनको क्यान्सर फर्केर आयो र उहासँग धेरै समय बाँकी छैन भन्दा म (एलेन) निराश भएँ ।’
माथिको फ्लोचार्टको सन्दर्भ लिदै, निम्न प्रश्नहरू यस्तो घटना/परिस्थितिमा हामीले स्वयम्लाई सोध्नु पर्छ (यो परिस्थितिमा निराशाको भावना) । यो निर्धारित गर्नको लागि कुन प्रकारको स्वयम् सूचना उपयोग गर्ने ।
प्रश्न १ : कसको स्वाभाव दोष मुख्य रूपमा परिस्थितिमा तनावको कारण हो या तनावको लागि को जिम्मेवार छ ? (कृपया ध्यान दिनुहोस्: हामी यी मध्य कुनै एक प्रश्न सोध्न सक्छौं ।)
उत्तर: यो स्थितिमा एलेनलाई निम्त्याएको तनाव मुख्य रूपमा उनको काकी (एलिसन) को परिस्थितिको कारण हो ।
प्रश्न २: यो गल्ती गलत कार्य, विचार या भावना हो कि यो गलत प्रतिक्रिया हो? ‘
उत्तर: यहाँ, आफ्नो काकीको क्यान्सर फर्किएको कारण एलेनले भावनात्मक प्रतिक्रिया दिएको हो ।
प्रश्न ३: के परिस्थिति परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
उत्तर: यहाँ डाक्टरहरूले भने जस्तै परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
त्यसकारण, माथिको विश्लेषणको आधारमा, यो परिस्थितिको लागि, B2 स्वयम् सूचना शैली प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
निराशाको भावना हटाउन प्रयोग गर्न सक्ने दुई सम्भावित B2 स्वयम् सूचनाहरु तल प्रदान गरिएको छ ।
जब म (एलेन) मेरो काकी एलिसनसँग कम समय बाँकी छ भनेर दु:खी हुन्छु, म ईश्वरलाई मेरो श्रद्धा बढाउनको लागि प्रार्थना गर्दछु कि उहाँले नै काकीको हेरचाह गर्नुहुन्छ र म शान्तपूर्वक नामजपमा ध्यान केन्द्रित गर्छु ।
जब म (एलेन) मेरो काकी एलिसनसँग कम समय बाँकी छ भनेर दु:खी हुन्छु, म महसुस गर्ने छु कि यो समय उनको हेरचाह गर्ने समय हो । त्यसैले, म उनको हेरचाह गर्नेछु र जुन थोरै समय बाकी छ म त्यो समय मनमा सझाउँनेछु ।
याद गर्नुहोस् – प्रत्येक घटना जहाँ अरु संलग्न छ जसले प्रतिक्रिया या तनाव उत्पन्न गर्छ, यसलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ कि परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्छ या सक्दैन ।
उदाहरणको लागि, जोनिसको मन दुख्यो जब उसले जोनलाई मद्दतको लागि बोलायो र उसले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्यो । जब विगतमा जोनलाई सहयोग चाहिएको बेला, जेनिस तुरुन्तै मद्दत गर्न गएको थियो ।
अब, यदि जेनिस काममा जोनको हाकिम हुन् र जोनसँग सहयोग नगर्ने दृष्टिकोण छ भने जेनिसले जोनलाई ठीकसँग व्यवहार गर्न र यहाँ आएर मद्दत गर्न भन्न सक्दछ । किनकि जेनिसलाई तनाव उत्पन्न गर्ने व्यक्ति या परिस्थिति परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्छ, तसर्थ यसमा B1 स्वयम् सूचना प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यद्यपि, जोन जेनिसको हजुरबाबा हुनुहुन्छ जो रिसालु स्वाभावको हुनुहुन्छ र सामान्यतया अरुलाई सहयोग गर्न चाहनु हुन्न, यसमा सम्भावना छैन कि जेनिसले हजुरबाको मन बदलन सक्छ र मद्दत मिल्न सक्छ । यस परिदृश्यमा B2 स्वयम् सूचना प्रयोग गर्नुपर्दछ |
B2 स्वयम् सूचना लिएर दुखद परिस्थितिहरुमा मनलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्दछ । हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने विषयहरुमा स्वीकृति आउँदा बोझ हटेर जान्छ त्यसैले तनावपूर्ण परिस्थिति र निराशावादी विचारहरूको सामना गर्न यो एउटा शक्तिशाली औषधि बन्छ ।
जब दैनिक परिस्थितिहरुमा अन्य व्यक्ति संलग्न हुँदा प्रयोग गरिन्छ, B2 स्वयम् सूचनाले हामीलाई वस्तुनिष्ठ, पृथक र गैर-प्रतिक्रियाशील रहन मद्दत गर्दछ, ताकि हामी आफ्नो दिन राम्रोसँग बिताउन सक्छौं । हामी अरूको गलत छनौट र नकारात्मक कार्यहरूबाट प्रभावित हुँदैनौं जसले हामीलाई पहिला थकित र क्रोधित बनाउथ्यो ।
जीवनमा प्रमुख घटनाहरूको बारेमा, B2 स्वयम् सूचनाले दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ किनकि हामी बुझ्दछौ कि यस्ता धेरै घटनाहरू प्रारब्धको कारण हुन्छन् । यदि एउटा व्यक्ति प्राकृतिक प्रकोपमा फसेको छ र आफ्नो सबै भौतिक सम्पत्ति गुमाउँछ भने, त्यो व्यक्ति साँच्चै भाग्यशाली हुन्छ किनभने उसले यो घटनामा जीवन दान पायो । धेरै व्यक्तिहरु अनजान छन् कि हाम्रो जीवनमा जे हुन्छ त्यसको ६५% अन्तर्निहित कारण नै प्रारब्ध हो, जस्तै विवाह र मृत्यु जस्ता सबै प्रमुख घटनाहरू । यो ज्ञानले मात्र हामीलाई अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण दिन मद्दत गर्दछ कि जीवनमा जुन घटनाहरू घट्छन् त्यसमा आध्यात्मिक कारणहरु हुन्छ ।
आउनुहोस् हामी केहि परिस्थितिहरू लिऔं जहाँ B2 स्वयम् सूचना प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी उदाहरणहरूमा, परिस्थिति वा अन्य व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन गर्न केहि गर्न सकिदैन ।
उत्तम-योजनाबद्ध कार्यहरू अप्रत्याशित जीवन परिवर्तन गर्ने घटनाहरू जस्तै गम्भीर बिमारी, बेरोजगार हुनु या सम्बन्ध विच्छेदको कारणले रोकिन सक्छ । जीवन सधै अपेक्षित जस्तो हुँदैन । धेरै तरीकाहरू छन् कसरी हामी खराब परिस्थितिहरुप्रति आफुलाई तयार पार्न सक्छौं । हामीसँग सबै भन्दा राम्रो तयारी छ र राम्रो विशेषज्ञता छ, तरपनि धेरै घटनाहरु नराम्रो हुन्छन् र परिस्थितिलाई सम्हाल्न हामीलाई एक्लौ छोडि दिन्छ ।
त्यसकारण, जब उत्तम-योजनाहरू असफल हुन्छन्, ती विभिन्न परिस्थितिहरुप्रति हामी के नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो दृष्टिकोणहरू/प्रतिक्रियाहरू र मनोवृतिहरु । तर यो गर्नु भन्दा भन्नु सजिलो हुन्छ । चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा, सकारात्मक दृष्टिकोण कायम राख्न धेरै प्रयास र साहस चाहिन्छ तर हाम्रो मनको उचित कन्डिशनिंगबाट यो सम्भव छ । B2 स्वयम् सूचना एउटा समाधान हो जसले हामीलाई त्यस्तो सबै परिस्थितिहरूसँग सम्झौता गर्न सक्षम गर्दछ जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । नियमित रूपमा यी स्वयम् सूचनाहरु लिदा मनलाई स्वीकार्न सहयोग मिल्छ जुन कुराहरु हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । त्यसो गर्दा, शान्त र स्थिरता अनुभव गर्न हामी सक्षम हुन्छौं ।